I-Bluedio H-Turbine, i-4.1 iibhloko zeBluetooth ngexabiso eliphakathi | Iindaba zeGajethi
I-Bluedio H-Turbine, iibluetooth ze-4.1 zentloko ngexabiso eliphakathi
Yonke imihla singqongwe lihlabathi apho nayiphi na intambo iyacaphukisa. Ukuncitshiswa kwamandla kunye nenkululeko yokuhambisa izixhobo zethu zidityaniswe ngokugqibeleleyo kunye nexesha "elingenazingcingo", yiyo loo nto ezinye iindlela kwihlabathi lesandi zazingazukuthatha thuba lide ukufika. Kuyinyani ukuba ii-headphone ze-bluetooth azinakho ukwamkelwa okubonakalayo ngenxa yemicimbi yokuzimela kunye nomgangatho wesandi. Nangona kunjalo, ngeebhetri ze-gen-gen kunye ne-Bluetooth 4.1 yetekhnoloji oku kuya kuphela. Kungenxa yoko le nto sikuphathela enye yeentloko zeBluetooth ezinelona xabiso liphezulu lomgangatho kwintengiso, kuba wonke umntu kufuneka akwazi ukufikelela kwitekhnoloji ye-wireless yeaudio ngaphandle kwesidingo sokwenza ngaphandle kwesandi esimnandi. Ngale nto sikubonisa nzulu iBluedio H-Turbine, uluhlu olufikelelekayo kakhulu, ngaphandle kwezixhobo zepremiyamu, kodwa ezibonelela ngokuzimela, uqhagamshelo lweBluetooth 4.1 kunye nomgangatho wesandi ophantse ungamoneleli ii-headphone eziphezulu.
1 Kutheni iBluedio? Ngubani iBluedio?
2 I-Bluedio Turbine H, ezona mpawu ziphambili
3 Ibhetri kunye noyilo
4 Ukucaciswa kobuchwephesha besandi nohlalutyo
5 Isiphelo sokugqibela
Kutheni iBluedio? Ngubani iBluedio?
IBluedio luphawu lwemvelaphi yaseTshayina uninzi luthathe isigqibo sokususa ihlazo kwiimveliso ezikumgangatho ophantsi ngexabiso eliphantsi, ukungena kumgangatho ophakathi kunye neemveliso eziphezulu ngexabiso eliphakathi. Ngokwetekhnoloji, intengiso yaseTshayina iyayazi indlela yokuziqhelanisa kakuhle kwaye ngokukhawuleza, iXiaomi, One Plus, iHuawei okanye iBluedio yimizekelo ecacileyo yendlela abagqibe ngayo ukungena kwimakethi yetekhnoloji ukuze bavule iimveliso ngokubanzi ezazivelisa uluhlu oluphakathi Iimveliso ezinomlinganiselo ophezulu kakhulu wenzuzo.
I-Bluedio Turbine H, ezona mpawu ziphambili
Sijongene ne-headband yeBluetooth yentloko, enoyilo olwahlukileyo lwala maxesha kwaye iyafana nezinye iimveliso ezininzi. Ngolwakhiwo olupheleleyo lwe-polycarbonate olusinika uluhlu lwemibala emine, luhlaza okwesibhakabhaka, mhlophe, mnyama namnyama. Ezi ntloko zentloko zibonelela ngezi zinto zilandelayo:
Unxibelelwano lweBluetooth 4.1, isizukulwane samvanje ngokusetyenziswa kancinci kunye nesantya sokuhambisa.
Intambo yokuncedisa ngentambo nge-3,5mm jack
Imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi
Amandla okwabelana ngeaudiyo nezinye ii-headphone nge-3,5mm jack
Uxinzelelo lwe-Acoustic (ingxolo)
Ukufikelela kwiimitha ezili-10 zoluhlu lweBluetooth
Ibhetri kunye noyilo
Sifumana ibhetri ye-lithium ebonelela kuthi ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-46 zencoko, kuba ibandakanya imakrofoni, ukuze siyisebenzise njengezandla ezingenazandla. Ikwabonelela ngeeyure ezingaphantsi kwe-1625 zokuma kunye ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-40 zosasazo lomculo. Ukutshaja ngokupheleleyo ibhetri kuya kuthatha malunga neeyure ezimbini. Kwividiyo ekhokela lo mbhalo, ungabona uphononongo olupheleleyo kunye nokungabhalwa kwebhokisi yentloko okokuqala kwisiteshi sethu seYouTube.
Kwifowuni yendlebe yasekunene, sifumana i-LED eya kuchonga ibhetri esinayo kunye nonxibelelwano lweBluetooth olusekwe kumbala wayo. Ngokubhekisele kwisithethi, ubungakanani be-57mm engekho ncinci ncinci, ubuncinci yindlela esibona ngayo. Ngokubhekisele kuyilo oluthile, siphambi kwee-headphone eziqhubekayo ngokubhekisele kwinto esiyifumana kwintengiso, ngenkangeleko ejikelezileyo kunye nomxube weleatherette, ngokudibeneyo kugqitywe ngeethowuni ezicwebezelayo kunye ne-mat kuyo nayiphi na imibala emine esiyikhethayo.
Ezi zinto zeplastiki azinalo naluphi na uhlobo lokuqiniswa kwesinyithi, nangona kubonakala ngathi zikwangumbala weplastikhi, nangona kunjalo, iplastiki ibonakala izinzile kwaye yomelele, into esingafanele siyithembe, kuba ukuyaphula kunokuba lula kunokuba sicinga xa siqala ukubona. Kwelinye icala, izembozo zeleatherette ezinamatheleyo zihlangabezana neenjongo zazo kakuhle, ibhanti yentloko ephezulu intofontofo, nangona kunjalo, ii-headphone zinokungonwabi kwindawo yokuqala ejikeleze iindlebe xa kudlula ngaphezulu kweeyure ezimbini, oku kuyakutshintsha nokusetyenziswa , xa beqala ukubumba kancinci kubungakanani bethu. Okokugqibela, ukuphakama kwebhendi yentloko kunokuhlengahlengiswa ngenkqubo esisiseko esityibilikayo enokuthi ibe mfiliba usuku nosuku.
Ukucaciswa kobuchwephesha besandi nohlalutyo
Izinto ezimangazayo zomsindo, mna ngokwam ndithathe ithuba lokuvumela abanye abathengi bavavanye ii-headphone kakhulu, ukuze bafumane uluvo njengenjongo kangangoko kunokwenzeka. Sonke safika kwisigqibo sokuba Kwakunzima okanye phantse kungenakwenzeka ukufumana loo mgangatho ngexabiso elifanayo. Okokuqala, ii-bass ziyakumangalisa, ziyonyuka ngokucacileyo, into engafanele ikothuse kuba bayayikhuthaza kakhulu, zii-headphone ezijolise kakhulu kumculo wentengiso kunye nomculo we-elektroniki, ukuba ufuna ukonwabela i-ballad yezixhobo, ngokuqinisekileyo ayizizo ezakho.
Uluhlu lwamaxesha: 2,4-2,45 GHz
Iiprofayili zeBluetooth: A2DP AVRCP HFP HSP
Impedance: I-16 Ohms
Ixesha lokuphendula: 20Hz-20kHz
Ubuntununtunu: 110 dB
Uluhlu lokugqwetha kwesandi: <0,1% THD
Umgangatho wokudluliselwa kwesandi ngokuthe ngcembe xa usenza unxibelelwano nge-3,5mm jack, sinokuwonyusa amandla esandi kancinane (nokuba siyacaphukisa) kwaye simamele ngokucacileyo okuthe kratya, nangona kunjalo, ayicingelwa ngalo nto. Eyona asethi yayo iphambili yile Sebenzisa uqhagamshelo lweBluetooth 4.1 yokusetyenziswa okuphantsi kunye namandla aphezulu, ke iaudiyo yeBluetooth intle ngaphandle kokumnandi. Ndithe, ekuboneni kuqala iaudiyo ngeBluetooth iya kubonakala yamkelekile, kwaye ilungile, nangona kunjalo banika yonke into ngonxibelelwano lwe3,5mm.
Zizi-headphone "zexabiso eliphantsi", kufuneka siqale kwisiseko sokuba akunakufane sifumane ii-headphone ezivela kwiimveliso ngokubanzi ezinikezela olu hlobo lomsindo kunye noyilo kwisandla seBluetooth 4.1, ukuba akukho nanye. Ukusuka apha sele siqwalasele ukuba ayizizo ii-headphone ezifanelekileyo zee-audiophile, kodwa kuluhlu olukhulu kakhulu lwabasebenzisi abafuna ii-headphone ezilungileyo ezingenazingcingo ngexabiso elingcono. Kuyo yonke i-intanethi uyakufumana uphononongo oluninzi lwezi ntloko zentloko, Zonke zilungile, enyanisweni eAmazon amanqaku abo aphakathi yi-4 kwaba-5.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba umgangatho wezinto ezisetyenziswayo awunakusilahlekisa njengakwezinye iiselfowuni zikaSony okanye zePhilips esinokuzifumana nakweyiphi na ivenkile ye-elektroniki, nangona zichasene kwaye zomelele kwimfazwe yemihla ngemihla, ukongeza ekubeni ngaphandle kwamacingo.
Ngokuphathelele isandi, mhlawumbi sinee-bass ezithile ezonyuselweyo, into enokuxazululeka ngokulula usebenzisa naluphi na uhlobo lokulinganisa. Isandi sinokubonisa ukulibaziseka komzuzwana okanye okuncinci, okuqhelekileyo kweBluetooth kunye nokuqhelekileyo kwazo zonke. Banikezela ngesandi esiphakamileyo samandla, esinokucaphukisa xa singaphezulu kwe-75%, ke oko kuya kubavuyisa abo bathanda ukunqunyulwa. Yintoni egqithisile khetha zonke izandi zangaphandle Xa siphakamisa isandi ngaphezulu kwe-50%, asiyi kuva nantoni na ngaphandle komculo, ke lumka, oku kunokuba yipro okanye ikhonkco kuxhomekeke kumsebenzisi. Ngokuqinisekileyo kufuneka ndicebise ukuthengwa kwabo bangazinikeleliyo ngokomculo kwaye bafuna nje ii-headphone ezingenazingcingo ngexabiso eliphakathi. Ukuqhagamshelwa yiBluetooth abashiyi nto inqwenelekayo xa kuthelekiswa ne-Sony Playstation Headset ebonisa i-7.1 VSS yeaudio kwaye ebiza ngaphezulu kokuphindwe kabini. Nangona kunjalo, ngonxibelelwano lwejack izinto ziyatshintsha, Ezi ntloko zenzelwe ukwenza umahluko ngeBluetooth, ngeJack sifumana ii-headphone ezifikelela kuluhlu oluphakathi lweSony kunye nePhilips umzekelo, kodwa loo nto ayizidluli. Nangona kunjalo, nangona kunjalo ziya kuba kukuthengwa okuhle ukuba sithathela ingqalelo ixabiso lalapha ngasentla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Bluedio H-Turbine, iibluetooth ze-4.1 zentloko ngexabiso eliphakathi
Ubungakanani benqanawa yesayensi
Iipilisi ezi-5 ezifanelekileyo zokunika umntwana le Krisimesi